FBC - Dureewwan paartiilee mormitootaa Zimbaabuwee lama Mugaabee waliin dorgomuuf hidhata uuman
FBC Sanbata duraa Caamsaa 18 2010 E.C. - Saturday, May 26 2018 G.C.
Pool Kaagaameen paarkii indaastirii Hawaasaa daawwatan
Dhoo’iinsa boombii Liibiyaa magaala Beengaazitti qaqqabeen lubbuun namoota 7 darbe
Ji’a Amajjiitii jalqabee lammileen Sudaan Kibbaa kumi 20 ol Itiyoophiyaa seenaniiru
Himannaan Malaakuu Faantaa fi Gabrawaahidfaa akka adda citu gaafatame
Dhiyeessiin humni Elektiriika Ityoophiyaa meeggaa waatii 380 irraa kuma 4 olitti guddateera
Dureewwan paartiilee mormitootaa Zimbaabuwee lama Mugaabee waliin dorgomuuf hidhata uuman
Finfinnee, Ebila 12, 2009 (FBC) Dureewwan paartiilee mormitootaa Zimbaabuwee lama Mugaabee waliin dorgomuuf hidhata uumaniiru.
Dureewwan paartii mormitootaa lamaanii kunniin hidhata kana kan uuman filannoon biyyaalessaa waggaa dhufu Zumbaabuweetti geggeeffamu irratti Pireezdaant Roobart Mugaabeen dorgomuufi.
Dureen paartii ‘MDC ‘ Moorgaan Chaangiraay fi aangoo isaanii irraa kan ka’an Itti-aanaa Pireezdaantii Zumbaabuwee kan turanii fi dursaa Paartii Naashinaal Piipls Jooyis Mujuuruudha waliigaltee hidhataa kana kan walii mallaatteessan.
MDC fi NPP ji’oota ja’an darbaniif waliin hojjataa kan turan yoo ta’u, wayita ammaa ammo hidhata isaanii cimsuuf dhimmoota murtaa’an irratti waliigalteerra qaqqabaniiru.
Miistar Chaangiraay akka himanitti biyyattiin guyyaa bilisa itti-baate bara Faranjootaa 1980 jalqabee aangoorra kan jiru paartiin biyya bulchaa jiru Zaanuu PF fi dura taa’aa isaa kan ta’an Roobart Mugaabee aangoon isaanii akka ga’u morkii cimaa gochuuf karoorfataniiru.
Paartiin tumsaa kun eenyuun akka hogganamu ibsamuu baatus baay’een isaanii paartileen mormitoonni Dureen Paartii MDC Chaangiraay kaadhimamaa akka ta’an fedhii qabu.
Mugaabeen amma waggaa 93 isaanii ta’es hidhata paartiiwwan mormitootaa kana injifachuuf akka hojjatan ibsaniiru.
Zaanuu PF filannoo biyyattii itti-aanuuf Pireezdaant Mugaabee kaadhimamaa godhee dhiheesseera.
Roobart Mugaabeen Zumbaabuwee bara Faranjootaa 1987 jalqabee hanga ammaatti pireezdaantummaan hogganaa jiru.
Oduuwwan Biroo « Dhaabbati Mootummoota Gamtoomanii Koongootti awwala ‘jimlaa’ 17 arguusaa ibse	IS poolisii Paariis ajjeesuu isaa hime »
Warraaqsi diinagdee Oromoo sochii gaarirra jira jedhame